Uhlaziyo lwe-3D kuyilo lwegraphic namhlanje | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Las Imilinganiselo emithathu ubude, ububanzi nobunzulu yomfanekiso. Inyani yile yokuba kuphela yinyani enamacala amathathu, kuba kulapho imizimba inomthamo. Iikhompyuter unokulinganisa kuphela imifanekiso ye-3D, kuba yinkxaso-mbini apho umfanekiso unemilinganiselo emibini kuphela: ubude nobude.
Oko sikubiza ngokuba uyilo lwe-3D ayikho enye into ngaphandle ubuchule obusetyenziselwa ukwenza izinto Ukulinganisa ivolumu. I-3D oopopayi iqulathe nika intshukumo kwinto eyilwe ngale ndlela kangangexesha elithile kwaye ukuvelisa izinto ezibonakalayo ezinemilinganiselo emithathu asiyonto intsha. Ngasekupheleni kweminyaka ye-1890, uWilliam Freese-Greene, uthathelwa ingqalelo njengovulindlela wefilimu, amalungelo awodwa omenzi wechiza inkqubo ye-3D yokuqala, kodwa ayiphumelelanga ngenxa yokuntsonkotha kwendlela.
1 Ukubaluleka kunye nokusetyenziswa kwe-3D kuyilo lwegraphic namhlanje.
2 Itekhnoloji ye-3D ayenziwanga nge-Avatar
Ukubaluleka kunye nokusetyenziswa kwe-3D kuyilo lwegraphic namhlanje.
Okwangoku ukwazi nokuphatha uyilo lwe-3D yinto efunekayo kubayili bemizobo emininzi, ngenxa ye- eluncedo kakhulu kuba bayonyusa iarhente yezixhobo ezikhoyo kwaye zihlala zezona ndlela zichanekileyo fumana umfanekiso othe tyaba.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo Inani lezicelo ze-3D lenyukile ngokucacileyo kwaye ukubaluleka kwezi ndlela kwakufumana ukubalasela ngakumbi kwihlabathi le ukuyila.
La Itekhnoloji ye-3d Ayenzelwanga i-Avatar, ifunyenwe kwaye yaphuhliswa ixesha elide kunokuba ungacinga. Kwaye bayili bemizobo Bebesebenzisa obu buchule kwindalo yabo kangangexesha elithile, ngaphandle kokuya phambili i-IMAX bubungqina boku.
Kodwa njengoko abalinganiswa be-movie Dogma babeqhele ukuhlekisa: “Akukho nto yaziwayo de kwenziwe umboniso bhanyabhanya malunga nayo", Kwaye oko ngokuyinxalenye kwenzekile ngetekhnoloji ye-3D, kunye nesidingo sokwenza njalo qulunqa iifomula ezintsha ukuthatha abaphulaphuli baye kumabala emidlalo bhanyabhanya. Inkulumbuso yeemveliso ezinkulu ezenziwe ngobu buchwephesha yiyo ekhokelele ekubeni ibekhona kwimilebe yomntu wonke.
Uluntu olukhulu olunelisekileyo ziziphumo, funa ngakumbi nangakumbi izinto ezenziwe kwi-3D. Ke wonke umntu wonwabile, abavelisi abakhulu, uluntu kunye nentengiso entsha yeTV kunye nevidiyo ezikhuthazayo ngale nkqubo.
Itekhnoloji ye-3D ayenziwanga nge-Avatar
Esi sesona sizathu siphambili sokuba iinkampani ezinkulu zoyilo lwegraphic Ukusuka kwihlabathi liphela bajike ekuphuhliseni nasekukhuthazeni obu buchwephesha, bebeka njengeyona nto iphambili kwiiprojekthi zabo zeshishini. Nangona okwangoku esona sicelo sikhulu sobuchwephesha sinje ezinxulumene nolonwabo kunye nokuzonwabisaKancinci, iinkampani zoyilo ezijolise kumacandelo afana nefashoni, intengiso okanye imiboniso yeenkampani, zibandakanya obu buchwephesha njengenxalenye yeeprojekthi zabo.
Ukuba sijonga i umnikelo okhulayo weemveliso ezinxulumene nale teknoloji kunye neemfuno zenjongo yoyilo lwegraphic ezinolwazi ngale ndlela, sinokugqiba ngaphandle kwamathandabuzo ukuba I-3D ilapha ukuhlala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uhlaziyo lwe-3D kuyilo lwegraphic namhlanje
Ukubaluleka kobugcisa bePop kuyilo lwegraphic